Akhriso: Qodobbada Ugu Muhiimsanaa Ee War Murtiyeedka Shirka Brussels – Goobjoog News
Hadaba, Akhris0, Qodobada Ugu Muhiimsan:
Waxaa la soo dhoweeyay nidaamka axsaabta badan, in doorasho dhacdo 2020ka, waxaa la soo dhoweeyay oo kale heshiiska dowladda federaalka ah iyo dowlad goboleedyada ee la xiriiray in Soomaaliya ay ka dhacdo doorasho qof iyo cod ah tan iyo 1969kii.
Waxaa la soo dhoweeyay heshiiska golaha amniga ee ku saabsanaa qeybiga kheyraadka, isku dhafka ciidamada iyo in amniga dalka lagala wareego AMISOM.
Waxaa lagu celiyay sida caalamka u ixtitiraamayo madaxbannaanida, qaranimada iyo midnimada Soomaaliya.
Waxaa la soo jeediyay in sharaciga doorashada uu baarlamaanka meel-mariyo December 2018, la sii wado diiwaan gelinta axsaabta iyo in haweenka la dhiiri geliyo.
Lix bil gudahood waxaa lagu taliyay in wax laga qabo arrimo ay ka mid yihiin: Maqaamka golaha amniga, qeybsiga kheyraadka, cadaaladda oo ay ku jiraan dhismaha maxkamadda dastuuriga ah iyo guddiga adeegga qaranka.
Waxaa walaac laga muujiyay arrinta Tukaraq, iyada oo lagu taliyay in wada hadal lagu dhameeyo.
Waxaa la ammaanay wada shaqeynta dowladda federaalka ah iyo AMISOM iyo sida AMISOM uga go’antahay in ay amniga ku wareejiso Soomaalida.
Waxaa la ammaanay qorshaha xasilinta caasimadda, iyo sida loogu guuleystay.
Wasaaradda Gashaandhigga waxaa lagu ammaanay arrimo ay ka yihiin nidaamka lacag bixinta
Dowladda Soomaaliya waxaa lagu ammaanay horumarka laga gaaray barnaamijka IMFta ee SMP, waxaa lagu taliyay in la xoojiyo isla xisaabtan.
Wasaaradda kaluumeysiga waxaa lagu ammaanay heshiiskii ay dowladda federaalka ah iyo dowlad goboleedyada ku heshiiyeen ay qeybsiga kheyraadka.
In kasta oo wax badan laga qabtay arrimaha banii’aadnimada hadana waxaa war murtiyeedka lagu sheegay in dadka dhibaateysay ay gaarayaan ilaa 5.4 Milyan, kuwaas oo gargaar iyo wax qabasho u baahan.